Ndị na-agba ọsọ kacha mma maka mkpa ọ bụla - Ezinụlọ
Idozi Ozugbo Onye India Ngwọta Homelọ Akpụkpọ Anụ Nri Ọrụ & Ego International Ejiji News Ejiji Agbamakwụkwọ Mma
Onye kachasị mma maka mkpa ọ bụla (na mmefu ego)
N'ihe banyere ịkwado nwa amụrụ ọhụrụ, ọ dịghị ụkọ ihe ndị mmadụ na-ekwusi ike na ị ga-achọ. Mana ikwu eziokwu, ị nwere ike ime na -enweghị ihe karịrị ọkara nke ihe ndị ahụ. (Skip the wipes warmer-trust us on this.) Enwere otu ihe, Otú ọ dị, na ị ga-achọ n'ezie: onye na-agagharị agagharị. Ọ bụ otu n'ime ịzụrụ ihe dị oke ọnụ ị ga-azụ, yana ọtụtụ nhọrọ, ọ bụkwa otu n'ime ihe mgbagwoju anya. Ọ bụ ya mere anyị ji gwa ndị nne na nna, ndị na-agba ịnyịnya ịnwale n'onwe ha na kpaliri ndị ọkachamara na Buy Buy Baby iji kpughee ihe ndị kachasị elu maka mkpa ọ bụla. Ebe a, asaa kasị mma strollers.
Njikọ: Ise kacha mma ara nfuli, dị ka ezigbo Nne
1. The Best dị fechaa Stroller: Babyzen''s YOYO + Stroller ụba
Na-eme atụmatụ ịwe ọtụtụ njem na obere gị? Ngwakọta nche anwụ a na-eme njem-a dị fechaa (na-abata naanị na kilogram 13), nke na-eme ka ọ dị larịị ma daba na ọtụtụ ngalaba ụgbọ elu. Nke ahụ pụtara na ịnwere ike iji ya malite oge ịpụsịrị n'ụgbọelu (agaghịzi ebu ibu gị na Nwa na-agbagharị agbagharị gburugburu ọdụ ụgbọ elu). Ndị nne na nna hụkwara n'anya na ọ na-abịa site na ike ịnọdụ ala ma nwee ike ijide ndị na-emegharị oche ụgbọ ala, na-eme ka ọ bụrụ otu n'ime nhọrọ njem na-agbanwe agbanwe. Ma buru n'uche na e nwere ihe kacha nta dị mkpa nke 16 pound (nke bụ ihe dị ọnwa isii dị ọnwa, na nkezi).
Ihe ndị nne na nna na-ekwu: Azụrụ m nke a maka njem nanị m ịga leta ezinụlọ mụ na nwata dị afọ abụọ na ọkara na ọnwa atọ. O zuru oke maka ịgagharị n'ọdụ ụgbọ elu ma enwere m obi ụtọ na agaghị m echere maka ihe mgbochi m ozugbo m si n'ụgbọelu ahụ pụta (enwere m ike iburu onye na-agagharị ụgbọ mmiri ma tinye ya n'okpuru oche ụmụaka m). Ọ dị oke mfe iji. Nkecha Na awade a ezigbo nwa m. Di m na-etinyezi ya n'ụgbọala ya ugbu a. Nkọwapụta nke ọma na-enye ya ohere ịnwe ihe na-eme mkpọtụ n’azụ oche ya.
Zụta ya ($ 450)
BOB Ndị na-agba ọsọ
2. Ihe kacha mma na-eme egwuregwu: BOB Rambler Jogging Stroller
Ma ị na-achọ ime brisk lap gburugburu ogige ahụ ma ọ bụ nwee marathon zuru oke n'okpuru eriri gị, ọ nweghị ihe mere ị ga-eji kwụsị ịgba ọsọ ozugbo ị nwere ụmụaka. Naanị jide n'aka na ị ga-enweta stroller nke nwere ike ịnabata ihe niile na-eto na mbara ala. Nhọrọ a niile na-eme ka nnukwu taya dị elu na nkwụsịtụ nkwụsị na nkwonkwo ụkwụ niile maka nkwụsi ike (kpochie wiil ndị dị n'ihu mgbe ha na-agba ọsọ iji mee ka onye na-agba ọsọ na-aga). O nwekwara ihe mkpuchi buru ibu-nke zuru oke maka oge ọkọchị ndị ahụ. Na-arụ ọrụ na oche ụgbọ ala BOB ma ọ bụ ndị ọzọ bụ isi oche ụgbọ ala (ihe nkwụnye ere iche) iji mepụta usoro njem zuru ezu. Ma mara na n’agbanyeghi na stroller a dabara adaba umu amuru ohuru n’eji ihe oku oche oche umuaka (ozo, ere ha iche), odighi atule ka i jiri ya mee ihe rue mgbe nwa ruru onwa asato. Nyefee na.
Ihe ndị nne na nna na-ekwu: Achọrọ m ihe eji eme ihe dị elu nke m nwere ike iji maka ihe niile. Nke a bụ ya. M bi na Montana ya mere achọrọ m onye na-agba ọsọ nke nwere ike ịgafe site na snow, n'okporo ụzọ gravel, ọmarịcha ezumike, njem, ịzụ ahịa na ihe omume mpaghara niile. Ihe eji eme ihe a zuru oke. Enwebeghị m nsogbu ọ bụla na ya.
nkwuputa na nri siri ike
Zụta ya ($ 260)
3. The Best Double Double stroller: Contours Options Elite Tandem Stroller
Ma eleghị anya, ịchọrọ onye na-agba ọsọ ụkwụ abụọ ozugbo ma ọ bụ ma eleghị anya, ị na-eche echiche ogologo oge. Kedu ụzọ ọ bụla, itinye ego na nke na-enye gị nhọrọ abụghị echiche ọjọọ. Nke a na-enye ihe nhazi oche oche asaa dị iche iche maka ụmụaka abụọ na oche ụgbọ ala abụọ (oche ọ bụla nwere ike ịnabata ihe ruru kilogram 40), na-enye gị mgbanwe kachasị dabere na ọnọdụ ụmụ gị nọ. Na mgbe ị ga-eche na ihe niile na-aga n’elu, ọ ga-apụta obere oghere n’okpuru, ndị nne na nna na-ama jijiji banyere nnukwu nkata nchekwa. Akụkụ ndị ọzọ kachasị amasị gị gụnyere igbe aluminom dị fechaa na ụkwụ na-acha uhie uhie nke nwere ihu igwe.
Ihe ndị nne na nna na-ekwu: Onye na-agba ọsọ maka mmadụ abụọ dị ukwuu. Oge izizi m jiri ya, enwetara m ọtụtụ otito maka etu o siri sie ike na etu saa oche na ibu dị. Enwere m otu afọ na otu ọnwa na onye na-agagharị agagharị na-anabata ma nnukwu. Azụtara m ihe nkwụnye carseat maka nwa ọhụrụ m na nri nri na ihe ọ cupụ cupụ na-a forụ ihe ọ forụ forụ maka obere nwa m ma ụmụaka abụọ nwere ntụsara ahụ. My naanị mkpesa ga-abụ na ọ na-adịghị n'ogige atụrụ elu niile otú ya mere na ọ bụ a bit buru ibu na-echekwa na-edebe na azụ nke m SUV-ọ na-ewe a otutu ụlọ. Agbanyeghị m ga akwado ya. Nweghị ike imeri ọnụahịa ahụ.
Zụta ya ($ 400)
4. The Best kọmpat stroller: Delta Childrenmụaka''s ipigide Stroller
Kedu ihe Clotch onye na-eme ihe nkiri enweghi ihe ọghọm, ọ na-eme ka ọ dịrị ya mma: Ọ na-apịa obere karịa akpa ahịa Trader Joe. Na, na ihe na-erughị kilogram 12, ọ dị mfe iburu ma wepụ otu aka, mana ọ ka na-adị ka ọ dị ike ka ị na-akwada ya n'akụkụ ụzọ. Ndị editọ anyị hụrụ n'anya n'agbanyeghị agbanyeghị obere, ọ ka nwere ohere nchekwa zuru ezu n'okpuru iji tinye akpa metụ akwa, n'agbanyeghị na ọ nwere ike ị ga-azụta caddy n'ihi na handlebars jide ekwentị gị, igodo na oyi na ime biya.
Ihe ndị nne na nna na-ekwu: 'Agaghị m agabiga ihe ọ bụla ngwa ngwa obere ihe a na-agbagharị — na obere oghere ọ na-ewe na ogwe aka m. M na-echefu mgbe niile iji weta a stroller, n'ihi na m kpọrọ asị ya na-ewere m dum akpati. The ipigide na-ewe otu obere akụkụ, n'ihi ya, ọ bụ mgbe niile na njikere. Ma ọ siri ike karịa ndị ọzọ na-agba strollers, dị ka ndị $ 25 n'ogige atụrụ-elu ndị ị hụrụ na-echekwa. N'ozuzu ya, m ga-asị na ọ kachasị mma maka nne na nna ochie, ndị nwere ike ịchọrọ onye na-agba ọsọ site n'oge ruo n'oge mana ha achọghị ọtụtụ ngwongwo ụmụaka na-ewere ohere n'ụlọ ha.
Zụta ya ($ 110)
5. Kachasị mma Bang-maka-Buck Stroller: Chicco Bravo LE Trio Travel System
Buy Buy Baby rates this stroller as a great budget-friendly option since 3-in-1 njem usoro abịa na nwa ọhụrụ oche oche gụnyere, na-ewe gị nwa ewu si ụlọ ọgwụ na toddlerhood. Ọ na-abịa na-agbanwe agbanwe kanopi, a nwa tree na abụọ cupholders na tray ndi nne na nna nwere iko abuo.
Ihe ndị nne na nna na-ekwu: Azụrụ m nke a na nso nso a maka ọnwa abụọ m. M gabigara ihe ole na ole na otu usoro 3-in-1 tupu oge ahụ ma ọ dịghị mfe iji. Usoro a bụ ikuku. Enweghị m nkụda mmụọ n’ịkpọbata nwa m. Ọ mgbari na otu mfe click. Mfe na-ezukọ na nnọọ nkecha dị ka a daashi !! Ahụrụ m ya n'anya ma gwa ya ndị enyi m niile.
Zụta ya ($ 380)
6. Onye Kachasị Mma Stsọ maka ibi obodo: UPPAbaby Minu
Mgbe oghere dị na ọnụahịa, ịchọrọ stroller nke kọmpat na enwere ike apịaji ma zoo. Ego isi maka nke nwere ike iburu ije ije okpukpu ato. N'iji aka ya otu aka (ka ị nwee ike ijide nwa na ogwe aka nke ọzọ) ma nwee ike ijikwa aka na eriri ubu, ihe a na-eme ka ọ dị arọ na 15 pound dabara ụgwọ ahụ. Extra mma mma? Ọ na-anọchi anya mgbe apịaji ya ka i wee chekwaa ya ebe ọ bụla ịchọrọ. (Ihe eji eji akpụkpọ anụ eme adịghị mma, ma.)
Ihe ndị nne na nna na-ekwu: Onye na-agba ọsọ a zuru oke maka ndị bi na ụlọ ije dịka m. Ebi m n'ala nke isii, nke a na-eme ka ọ dịrị m mfe ijigide ma jide nwa m kama ịrịọ enyemaka.
7. Kacha mma N'ozuzu Stroller: UPPAbaby VISTA
O nwere ike ịbụ otu n'ime ọnụahịa dị ọnụ ala karịa na ndepụta ahụ mana ndị nne na nna hụrụ ihe ịtụnanya a n'anya na otu o si dị ukwuu maka ezinụlọ na-eto eto. Nke ahụ bụ n'ihi na Vista na-agụnye oche bassinet na todd, yana iji nweta mgbakwunye nke bọọdụ Rumble Seat na PiggyBack, ị nwere ike ịkwado ụmụaka atọ na otu ihe a. Mara mma, nri? Ọ na-agbagọ n’otu nzọụkwụ — n’akụkụ ma ọ bụ n’etinyeghị oche ahụ.
Ihe ndị nne na nna na-ekwu: Stgbọala a anọwo na-azọpụta ndụ! Nwa anyi abiala otu ma anyi ejirila ihe eji egwu egwu tinyere oche ugbo ala Uppababy kemgbe izu izizi. Bassinet dị irè na ọnwa ole na ole mbụ maka ijegharị ya ọ fọrọ nke nta kwa ụbọchị. Uru kachasị mma bụ etu ụgbọ ala ụgbọ ala si adị mfe. Agara m ya ọtụtụ njem ịzụ ahịa ma nwee ike ịkpọba ya n'ụgbọ ahụ na-ebilighị ya. Nkata di na ukwu di ukwu ma di egwu. Naanị m na-ewere ịzụ ahịa ihe ndị na-eme mkpọtụ ma jiri ala maka ihe oriri niile. Anyị were dum stroller esenidụt na kwekọrọ ekwekọ Uppababy akpa na akpa e mebiri site ụgbọ elu dapụtara na dị nnọọ obere mmebi ahụ. Uppababy dochie anya okpokolo agba ohuru n’ime ubochi.
Zụta ya ($ 900)
Njikọ: AKW BKWỌ 3 Kachasị mma na AMAZON
Categories Atụmatụ & Ndụmọdụ Ejiji Agbamakwụkwọ Ahụike
eke ụzọ ịkwụsị ntutu isi na regrow ntutu
Hollywood kacha mma fim
ụwa kacha mma ịhụnanya nkiri
esi belata afọ abụba site na mmega
ụmụ agbọghọ nọ na fim
diamond ihu udi siri
esi ewepu ntutu di na ihu